Indlela yokuphucula indlela yokwenza uluhlu lwamaxabiso e-Amazon ngendlela engcono ngayo?
Ukuqwalasela ukuba i-Amazon iyinjini enkulu yokusesha ejongene kakhulu nemveliso ekuthengisweni, kufuneka ukwazi indlela yokuphucula iphepha lakho lomkhiqizo wase-Amazon kunye nokulungelelaniswa okufanelekileyo kwizinto eziphambili ezijoliswe kuzo.Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokuphucula uluhlu lwemveliso yama-Amazon ngamacandelo alo aphezulu, njengeSihloko somkhiqizo, Amanqaku eBhuloza, Inkcazelo yeMveliso, kwakunye neMveliso yeeMifanekiso. Ekugqibeleni, ukuzifumana phakathi kweziphumo zophando eziphezulu apha. Ngoko, makhe sibone indlela yokuphucula ukulungiswa kwe-Amazon yakho ngegama elingundoqo ngendlela enokwenzeka ngayo.
Indlela yokuphucula i-Amazon Product Listing
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe siqale ngokuqonda okuyisiseko kwamagama aphambili kunye nokusetyenziswa kwabo okufanelekileyo phantsi kwenkqubo yokucwangcisa ngaphaya - felt blanks for hats. Ngoko, ukuba ufuna ukubona i-intanethi enkulu ye-intanethi ethathelwe kwiintengiso zakho zeemveliso, ngoko kuya kufuneka uphucule iphrofayli yakho ye-Amazon kunye namacandelo ayo aphezulu-ekugqibeleni ujonge i-rankings ephezulu eboniswe phakathi kwabathengisi abahamba phambili bebekhokele phambili. Ngakolunye uhlangothi, izikhundla zakho zokusesha ezikhoyo ziza kwenza kakuhle - njengendlela yokuthengisa ngokuthe ngqo yokugcina i-drop shipping shipping. Ngakolunye uhlangothi, ke, unako ukulawula i-market kunye neenkcazelo ezinyanzelisayo ngokwenene ezijoliswe kuyo eziphambili ezijoliswe kuyo kunye nemigama yokukhangela imilenze ende esetyenziswe ngabathengi bamanani. Ewe, luhlobo lokuphazamiseka - ukuba uluhlu oluphezulu, uya kufumaneka ngokukhawuleza kwaye uthengise ngakumbi. Okanye ngokulandelelana - xa ufumanisa ukukhawuleza, uza kuthengisa ngaphezulu, kwaye ubeke phezulu emva kwayo yonke into. Ngezantsi ndiza kucima imfihlelo kwaye ndibonise indlela yokuphucula uluhlu lwemveliso yama-Amazon ngamacandelo alo aphezulu.
Ukudala Isihloko somkhiqizo
Igama ngalinye eliphambili elifunyenweyo kwisihloko sakho somkhiqizo lufunwa. Kuthetha ukuba kusetyenziswe nayiphi na amagama angundoqo okanye imifanekiso yokukhangela imilenze ngokuphindaphindiweyo - zombini kwisihloko sakho somkhiqizo, nakwezinye iindawo kwiphepha lemveliso yakho - kucetyiswa kakhulu ukuba igwenywe ngazo zonke iindleko. Ngoxa udala isihloko somkhiqizo, khumbula ukubeka apho amagama akho angundoqo ngokulandelelana komyalelo wokunciphisa. Ngaloo ndlela, ungalokothi uphumelele, okokuba, ngaphandle kokuba ufuna ukugqithisa ngamagama angundoqo uze uziphathe kakubi ngaphezu kokulungileyo.
Ukuphucula uluhlu lweeNqaku zeBlue kunye neNkcazelo yeeNkcukacha
Okokuqala, qiniseka ukuphepha iimpazamo eziqhelekileyo eziqhelekileyo kunye neengongoma zeebhola kunye nokulungiswa kwemveliso yomsebenzi:
) Ungafaki naluphi na oluchanekileyo ngokupheleleyo okanye nolwazi olukhohlisayo ngenjongo - umzekelo, nje ukuba ube nomdlalo ochanekileyo wokukhangela ngamagama egama okanye nayiphi na enye inokukhuphisana.
Gwema ukudala uluhlu olude kakhulu lweenqwelo okanye iinkcazo zeemveliso ezigqithiseleyo ezigcwele iinkcukacha ezininzi ezingadingekile / eziphindiweyo.
Ungaze uzame ukuhambisa iindwendwe zakho kwenye iwebhusayithi (i. e. , ungazami ukusebenzisa nayiphi na intlawulo yeqela lesithathu, umenzi ochanekileyo, okanye idatha yokuphromotha ngokuvulekileyo ngaphaya).